I-infographics: Imfihlo yeendaba zeNtlalo | Martech Zone
Njengokuba i-CAN-SPAM ingatshintsha ngonaphakade kwimveliso yentengiso ye-imeyile, kufanelekile ukuba kusetyenziswe imigaqo emikhulu ekusetyenzisweni kweendaba zentlalo kunye nendawo yokuthengisa ehambayo. Ngelixa ndiqinisekile ukuba ishishini likwi imeko elusizi njengoko i-infographic engezantsi inyanzelisa, ndiza kulikhusela eli shishini kuba lisencinci ngokumangalisayo kwaye liyinyani entsha. Izixhobo kunye nolwazi azizange zifumaneke njengokuba zinjalo namhlanje. Ndiyakholelwa ukuba abathengisi abanoxanduva basebenzisa olu lwazi-hayi ukujonga abathengi-kodwa ukwenza amava abo.
Eyona nto ndiyikhathazayo kukuchaza. Njengokuba ukutya kufuna ulwazi lwesondlo lupapashwe kwifomathi ethile, ndiyakholelwa ukuba sidinga ifomathi yendalo iphela yokuxelwa kwedatha ephuhliswayo kwaye kuvunyelwene ngayo ngumzi mveliso. Abathengi abasokuze bahlale phantsi bafunde imigaqo yezivumelwano zenkonzo kunye nemigaqo-nkqubo yabucala. Ulwimi aluqondakali… ngamanye amaxesha ngenjongo. Iinkampani zetekhnoloji yokuthengisa ziibhulorho phakathi komthengi kunye nomthengisi, kwaye kufuneka babe noxanduva kwaye baphendule ngendlela abakhusela ngayo kwaye babelane ngayo olo lwazi.
Imidiya yokuncokola kunye nokuBucalaUbudlelwane phakathi kwemithombo yeendaba zentlalo kunye nemfihlo bekude kwaba yinto enempikiswano, kodwa ngolwaphulo lwamva nje lwabucala, ukutshintsha kwezinto zabucala kunye nokunyuka ngokubanzi kwezinto esabelana ngazo kwimidiya yoluntu, ngoku kukho ingqalelo ehlaziyiweyo kwisihloko esinengxaki. Ngabathengi baya bexhalaba ngakumbi malunga nokukhusela ubumfihlo babo kumaxesha eendaba ezentlalo, iinethiwekhi zentlalo kufuneka zenze imfihlo phambili ukuze kugcinwe abathengi njengabalandeli nabalandeli.
Ukuba kukho umyalezo omnye kule infographic, kukuba abathengi abanalo nofifi lokuba idatha yabo isetyenziswa njani. Kulapho kufuneka sigxile khona!
tags: wabucalamiseloimfihlo yemidiya yoluntuimimiselo yemidiya yoluntu
Unyaka omnye-iipesenti ezingama-700 zokuKhula kweMfono
Feb 28, 2012 ngo-11: 15 AM
Ndiyakholelwa ukuba abathengisi abanoxanduva basebenzisa olu lwazi-hayi ukujonga abathengi-kodwa ukwenza amava abo. (ulungisa umqala!)
Jul 28, 2012 ngo-9: 17 PM
Ubomi buya kuba nzima kakhulu kubayili bamava omsebenzisi kule minyaka imbalwa izayo.